Sondage Ankatso : 13% sisa no manara-dia an’i Rajoelina! – MyDago.com aime Madagascar
Sondage Ankatso : 13% sisa no manara-dia an’i Rajoelina!	Henri Randrianjatovo - Magro 26/04/2011
Nitohy tamin’ity androany ity ny hetsika nataon’ny ankolafy telo tetsy Behoririka. Ireo mpandaha-teny rehetra dia samy nitondra vaovao hoan’ny mpiara-mitolona.
I Marcel avy ao amin’ny ankolafy Zafy Albert dia nilaza fa tsy afaka nifaly sy nifety amin’ny tokony ho izy ny vahoaka malagasy tamin’ity fetin’ny paska ity noho ny hamafin’ny fiainana. Nanamafy ny tenany fa hisy hetsika lehibe hatao ny 01 may 2011 ho avy izao, izany hoy izy dia natao ho an’ny mpiasa rehetra, ireo very asa rehetra, sy ny vahoaka malagasy tsy an-kanavaka mba hanehoana ny herin’ny vahoaka.
Momba ilay fifanaovan-tsonia hoan’ny « mouvance elargie» dia niova ho « rodobe ny vahoaka malagasy » no anarana iantsoana azy hoy Marcel, efa nahavita ny soniany ihany koa ny any amin’ny faritra mahakasika izany hoy izy .
Henri Randrianjatovo indray dia nitatitra ny hitany tao amin’ny gazety Lakroa : fa efa tonga amin’ny tanjona ambony ny fanelanelanana ary nanamafy izany ny Troïka hoy izy. Tsy dia misy ireo olona voasazy intsony ao anatin’ny FAT fa dia lasa « plate forme, alliance, sns… »fa mbola manohana an’i Andry Rajoelina hatrany anefa, ny eo ihany no eo ka mahakivy ny vahoaka ny ataon’ireo mpanao politika ireo hoy ny solombavambahoakan’ny Faratsiho.
Maika hanao fifidianana hosoka ireo FAT ireo hoy ny depioté Henri fa na fifidianana sefom-pokontany aza mety tsy ho ho lany mihitsy, ny 13% sisa no makasitraka an’i Rajoelina araka ny sondage natao teny Ankatso hoy ity zanak’I Dada ity.
Ingahy Olivier Rakotovazaha indray dia nanamafy fa ny 2/15 ny filohan’ny SADC no nandray any i Andry Rajoelina ary tsy nisy vokany ny dia nataony tany farany teo, izao dia i Monja Roindefo indray no ho raisin’i Jackob Zuma. Azo tsapaina amin’izany ny lanjan’i Andry Rajoelina hoy izy.
Mahakasika izay ihany dia nahazo ranodranony tamin’ny frantsay i Simao dia nanilika ny ankolafy telo.
Hanomana hetsika goavana isika hoy Rakotovazaha, ny mpiasa sy ny tsy an’asa, ary tena hetsim-bahoaka koa io. I Simao aza anie manoratra anaty rapport-ny ny resaka ataontsika rehetra eto an-kianja ka ilaina ny fahatongavana maro amin’izany koa dia ho TSAR (Transition Sans Andry Rajoelina) tokoa ny volana may hoy ny namaranany ny kabariny.
Hanan-tsiny raha tsy mandroaka an’i Rajoelina Manjono vahoaka i Andry Rajoelina Rajoelina sy ny tafika no tompon’antoka Auteur Solo Razafy*Publié le 26 avril 201127 avril 2011Catégories Magro, Malagasy, Politique	4 pensées sur “Sondage Ankatso : 13% sisa no manara-dia an’i Rajoelina!”	ralay dit :	26 avril 2011 à 20 h 04 min	Mazava ho azy fa ny Miaramila, Polisy, Zandarma, izay mahazo tombontsoa miaraka @ ireo mpanao afera maloto no mbola manohana an’i Andry TGV .No comment !
Bemafohy dit :	26 avril 2011 à 21 h 04 min	Tsara izany!nisinisy mihintsy mantsy ny tanora nanao an’io rajoelina io ho filamatra tsy nianatra fa tonga dia nanao afera nampiasa volan’olona dia niseho azy ho babany dia niroboka koa ny tanora indrindra fa ny tia fetifety sy ny vehivevy jejojejo niandrandra azy kanjo sendra sokina tapon-dalan-kaleha.Dia izao lasa fahavalom-bahoaka.Ilay 13% angamba dia ankizy maivan-doha ao am-pianarana.
GTT Philippines dit :	27 avril 2011 à 10 h 18 min	Aleo mihintsy ary ny mpianatra higrevy sy haneho ny heviny raha mahatsapa izireo fa tsy rariny intsony izao fa hatrizay mantsy toa tambatambazana bonbon anglais sy tsaky dia vita matavy. Efa hitantsika izany, ary efa indroa niseho io nividianana amin’ny venty sy kirobo ny mpianatra io. Zaho aloha dia tena manontnny tena mihintsy hoe, dia tena mitampina maloto ve ny mason’ny olona sasany no tsy mahita ny zavadoza nitatao sy efa eo antampondohany é? Ilay fitiavana vao ity ihany é. Izao midaraboka ny firenena. Ary ireo mpianatra eny amn’ny anjerimanontolo ireo mihintsy no faly fa hoe tanora mpanongampanjakana no eo @ toeran’i Ravalomanana. Izany hoe nitetika ny hahazo fanjakana amin’ny fanonganana koa izany ireo atsy aoriana???? Izany ve no fanabeazana???? Mampalahelo sy mahaontsa ary mampodimandry ilay fisainana. Izaho indray na dia misy aza ny fotoana maloka dia tsy ho kivy mihintsy fa miandry sy manohana ary mihetsika mafy arak’izay tratrin’ny heriko amin’ny hiverenan’ny firenena amin’ny laoniny.
Tsy tia mpanjanaka dit :	27 avril 2011 à 11 h 47 min	Hita t@ na site iray : Rajoelina aurait amené au Qatar sa femme et ses enfants pour simuler un week-end pascal en famille. Le vrai but du déplacement était de trouver des fonds pour ses projets et de l’argent pour financer sa campagne aux élections. Il a ainsi rencontré des hommes d’affaires juifs et arabes intéressés par nos ressources naturelles.
Amidy daholo na tany na harena voajanahary.
Précédent Article précédent : Ataon’ ingahy Rolly Mercia anjorom-bala ny web-journaliste !Suivant Article suivant : A trois contre un, les foza sont toujours là !